CANON ၏ MP230 များအတွက်ယာဉ်မောင်း DOWNLOAD - မောင်းသူ - 2019
Canon ၏အမတ် 230 ပရင်တာများအတွက်ယာဉ်မောင်း Download လုပ်ပြီး install
Service ကို Yandex Disk ကိုမသာမဆိုစက်ပေါ်ရှိအရေးကြီးသောဖိုင်များကိုအရန်လက်လှမ်းရှိသည်ဖို့အခွင့်အလမ်း, ဒါပေမယ့်လည်းသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူမျှဝေနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအဘို့သင့်လျော်သည်။
မိုဃ်းတိမ်က load ရုံက link တစ်ခုပေးဖို့လုံလောက်တဲ့ - သင်မျိုးစုံအသုံးပြုသူများအဖို့ကြီးမားတဲ့ file ကိုပေးပို့ဖို့လိုအပ်တဲ့အခါဒီအလွန်အသုံးဖြစ်ပါတယ်။
Yandex Disk ကိုကနေတဆင့်ဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်းဘို့နည်းလမ်းများ
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာသင့်ရဲ့တစ်ဖိုင်သို့မဟုတ်ဖိုင်တွဲဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်တဲ့ link ကို generate "မိုဃ်းတိမ်သည်။ " link တစ်ခုပေါ်လာသောအခါ, သင်ကအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါဖို့လိုအပ်ပါတယ်, ပြီးတော့အခြားအသုံးပြုသူများမှ၎င်း၏အပြောင်းအရွှေ့အတွက်အားလုံးရရှိနိုင်ရွေးချယ်စရာများစာရင်းကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Method ကို 1: လူမှုကွန်ယက်ကနေတဆင့်ပို့ပါ
: အဆိုပါ drives တွေကို Yandex ကဲ့သို့သောန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့်လင့်များပေးပို့ခြင်းရရှိနိုင်ပါသည်
ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်, လူကြိုက်အများဆုံးလူမှုကွန်ယက်အဖြစ် VKontakte ယူပါ။
တစ်ဦးကဝင်းဒိုးအသစ်ဖွင့်လှစ်။ ဒီနေရာတွင်သင့်ရဲ့ repository ကိုရဲ့ contents ဖို့ link ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်သူအမိန့်, ဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ပါတယ်။ သင်တဦးတည်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး, နေရာအမှတ်အသားတစ်ခုခုပေးပို့ချင်လျှင် "ပုဂ္ဂလိကမက်ဆေ့ခ်ျကို Send" နှင့်စာရင်းထဲကမိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုရွေးပါ။
လိုအပ်မယ်ဆိုရင်လက်ခံသူတစ်ဦးမှတ်ချက်ကချွတ်ပစ်သငျသညျကိုသိရေးပါ။ စာနယ်ဇင်းများ "Send".
သင်၏ "မိုဃ်းတိမ်ကို" ရဲ့ contents ဝင်ရောက်ဖို့တူညီမူအရအားဖြင့်အခြားလူမှုရေးကွန်ရက်များနှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုသူများကိုရနိုင်သည်။
စကားမစပ်, သင်၏အဆွေခင်ပွန်းဖိုင်ရရှိလာတဲ့ကိုသင့်ကွန်ပျူတာကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် Yandex Drive တွင်မှတ်ပုံတင်ထားခံရဖို့မရှိပါ။
နည်းလမ်း 2: တစ်မေးလ် Yandex ပေးပို့ခြင်း
သငျသညျ Yandex ကနေမေးလ်ဝန်ဆောင်မှု၏အသုံးပြုသူတစ်ဦးလျှင်သင်သည်လည်းလျင်မြန်စွာယင်း၏ E-Mail ကလက်ခံရရှိသူတစ်ဦးရတနာ link ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
စာရင်း item ကို Select လုပ် "မေးလ်".
Yandex မေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်အက္ခရာများကိုပို့မယ့်ပုံစံကိုနှင့်အတူတစ်ဦးကပြတင်းပေါက်။ link ကိုအလိုအလျှောက်စာလုံးပေါင်းခေါင်းစဉ်နှင့်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုပြောင်းလဲမိတ်ဆွေတစ်ဦး၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ပါ။ စာနယ်ဇင်းများ "Send".
ကျနော်တို့က ZIP ဖိုင်-archive ကိုရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်ကို download လုပ်ပါထို့နောက်တစ်ဦးတစ်ခုလုံးကိုဖိုင်တွဲ Yandex drive ကိုပေးပို့ခြင်းအကြောင်းပြောနေတာလျှင်သတိပြုပါ။
Method ကို 3: လင့်များကူးပါနဲ့ပေးပို့
အဆိုပါ repository ကိုအတွက်လိပ်စာဖိုင်, သငျသညျရိုးရှင်းစွာကူးယူနှင့်လူမှုကွန်ယက်များ, အီးမေးလ်, ဒါမှမဟုတ် Yandex များ၏စာရင်းအတွက်ထောက်ပံ့ပေးမပေးကတခြားလမ်းကနေတဆင့်သတင်းစကားကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
စာနယ်ဇင်းများ "Copy ကူး Link ကို" ဒါမှမဟုတ်ကီးဘုတ် shortcut ကိုအသုံးပြုနိုင်သည် ပြီးရင် Ctrl + C ကို.
ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်း၏ပုံစံငါးပိ link ကို "ထည့်" ဆက်စပ်မီနူးသို့မဟုတ်စာနယ်ဇင်းအတွက် ပြီးရင် Ctrl + V ကိုနှင့်အခြားအသုံးပြုသူကပေးပို့ပါ။ ဒီတူစံနမူနာအပေါ် Skype ကို:
ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် program ကို Yandex Disk ကိုသုံးစွဲဖို့လေ့ရှိသောသူတို့သည်သူတို့အဘို့သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ဖို့နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည် က repository ကို၏ဝက်ဘ်ဗားရှင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာပေးပို့ခြင်းထိုကဲ့သို့သောစာရင်းမဆံ့ပါဘူး - ထို clipboard ထံ link ကို copy မှသာဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။
Method ကို 4: QR ကုဒ်ကိုအသုံးပြုခြင်း
နောက်တနည်းအနေနဲ့, QR ကုဒ်ကို generate နိုင်ပါတယ်။
ကို Select လုပ်ပါ "QR ကုဒ်ကို".
Link ကိုတိုက်ရိုက်စာဝှက်ထားတဲ့ပုံရိပ်သို့ကူးပြောင်း။ ဒါဟာကို formats တစ်ခုဒေါင်းလုတ်လုပ်နှင့်သူ၏စမတ်ဖုန်း၌ဤ link ကိုဖွင့်လှစ်, QR ကုဒ်ကိုဖတ်ရှုဖို့လျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုသည်သူကိုမိတ်ဆွေတစ်ဦးမှပေးပို့နိုင်ပါသည်။
, code ကိုဖတ်ပါစာသားပုံစံပြုလုပ်ရတင်သွင်းဖို့လွယ်ကူ: သင်လျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာ SMS ကိုသို့မဟုတ် instant messenger ကိုမှတဆင့် link ကိုပေးပို့ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာအစသင့်ရဲ့ပြဿနာကိုသက်သာရာနိုင်ပါတယ်။
Yandex Disk ကို developer များသငျသညျမဆိုအဆင်ပြေလမ်းအတွက်ဖိုင်တွေမျှဝေနိုင်ပါသည်သေချာစေပြီ။ တစ်မိနစ်ထက်လျော့နည်းလင့်များ၏တည်ထောင်ပြီးနောက်သင်၏အဆွေခင်ပွန်းသင်သိမ်းဆည်းထား, ရှုမြင် download, သို့မဟုတ်သင့် disk ကိုဖိုင်ကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ပါလိမ့်မည်။